१५ सय कैदीको भीडमा आलम, अरु कैदी हरु संग दुख पोख्दै भन्छन मलाई फसाइयो ! - Himali Patrika
१५ सय कैदीको भीडमा आलम, अरु कैदी हरु संग दुख पोख्दै भन्छन मलाई फसाइयो !
हिमाली पत्रिका २ मङ्सिर २०७६, 3:01 am
काठमाडौं, २ मंसिर । रौतहटको राजपुर बम’का’ण्डका नर’संहारका आरोपी प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई हाल राजधानीको नख्खु कारागारमा १५ सय कैदी सँगै राखिएको छ, उनि मधुमेहका बिरामी समेत हुन् ।
रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिएलगत्तै आलमलाई रातारात नख्खु कारगार ल्याइएको थियो । नख्खु कारागार प्रशासनले आलमलाई सामान्य कैदीलाई जसरी नै राखिएको जनाएको छ । नख्खु कारागारका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेल आलमलाई कुनै अतिरिक्त सेवा सुविधा नदिइएको बताउँछन् ।
‘यो कारागारमा १५ सय कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये आलम पनि एक हुन् । सामान्य कैदीलाई जसरी राखिन्छ, त्यसरी नै राखिएको छ,’ कारागार प्रमुख पौडेलले भने । मधुमेहका रोगी उनले कारागारमै सुई लिने गरेका छन् । यस्तै कोहीसँग बोल्नु परे आफूलाई ष्ड्यन्त्र गरेर फसाइएको गुनासो गर्छन् । राजधानी दैनिकबाट